fanafohezan-teny : TO
Créé : 1973
Aza adino ny discuss Ajou University
Ny tantaran'ny Ajou University dia feno zava-tsarotra vaovao: izany no tsy nanokatra sisintany vaovao ao Korea ny fampianarana ambony amin'ny alalan'ny fampidirana ny roa-ambaratonga rafitra amin'ny oniversite any ivelany ho an'ny fotoana voalohany teo Koreana anjerimanontolo, fa dia nitombo toy ny anankiray amin'ny mpitarika ao amin'ny anjerimanontolo ihany no tokony ho efa-polo taona hatramin'ny fananganana.
ankehitriny, Ajou dia vonona mba handray indray fanamby. Izany dia manonofy ny ny "Faharoa Fametrahana" mba hametraka ny fototra noho ny iray jato taona ho toy ny mpitarika oniversite sy ho tonga ny fandrian-jaza ny tena mpitarika ny fiaraha-monina.
Amin'ny alalan'ny hamaroan'isa fivoarana sy ny hatsaran'ny dingana, isika nanao ny fanokafana ny vanim-potoana ny "Ajou Premium" ary manova izao tontolo izao amin'ny anaran'i Ajou toy izao manaraka izao:
voalohany, Update University no Alaharo eto ny Excellent Talents, izay volana roa ny mpianatra ny tenany sy ny fiaraha-monina manontolo.
Ajou University dia hametraka ireo mpianatra ny "Fahaizana ho velona" eo amin'ny fiaraha-monina fifaninanana amin'ny fahalalana fototra sy mafy orina ny fampianarana ao amin'ny majors, ny "Fahaizana ny maka ny dingana voalohany" ka dia afaka mahita ny zavatra tiany sy hamaha olana eo ny, ary ny "Fahaizana ny mirindra velona" izay izy ireo fiheverana ny hafa sy ny fanajana ny fahasamihafana.
faharoa, Ajou University dia hanamafy orina ny fikarohana mpitarika sy hitarika ny lalana ho an'ny akademia sy ny orinasa.
Update University no hanenjika "Evolutional fikarohana" amin'ny alalan'ny famoronana sy convergence miorina amin'ny fototra fahaiza ary "Tsara fikarohana" amin'ny alalan'ny feo sy ny zava-baovao fifaninanana rafitra fandrisihana, ary dia hiteraka "Mahomby fikarohana"vokatra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny indostria, academia, fikarohana andrim-panjakana, ary bahoaka fikambanana.
fahatelo, Ajou University dia hanatanteraka ny anjara asantsika sy ny andraikitra noho ny fanovana ny fiaraha-monina sy ny manokatra vanim-potoana vaovao.
Ho mampifantoka ny fahaiza-manao amin'ny "Fananganana Renivohitra ara-tsosialy" fa mirindra velona, "Fanatsarana ny ara-tsosialy fivezivezena" izay mamela ny olona mba hifindra miakatra mifototra amin'ny ny ezaka, ary "Manomana ny fanakambanana ny Koreas" Ankoatra ny fanitarana ny tratrarina manerantany.
Mba mahatsapa izany fahitana, the people of Ajou University will begin three “Pleasant Innovations.”
Zava-baovao dia ny hoe tapa-kevitra mafy ny handresy sy hanova ny zava-misy amin'izao fotoana izao, famoronana ny hoavy fa manantena. Izany dia tsy mamerina ny zavatra nataontsika tamin'ny lasa na manaraka ny fomba efa naka ny hafa ihany no haingana. Izany dia nanokatra lalana vaovao eo amin'ny ny amin'ny hafanam-po.
izany zava-baovao ny tontolo iainana mba mamorona handresy ny zava-tsarotra atrehin'ny antsika; zava-baovao ny tenantsika, fandravana hiala sy ny fanovana ny fomba teo aloha ny mieritreritra sy miasa, ary hafa ny rafitra ho an'ny tenantsika; ary zava-baovao ara-tsosialy fa ny fampivelarana ny fiaraha-monina amin'ny fomba tsy misy kilema eo anivon'ny ady sy ny fisaraham-bazana.
Ireo dia Pleasant sy mahafinaritra fanavaozana satria faly isika manao azy, fa tsy ho nilaza ny amin'ny olon-kafa.
Ireo zava-baovao mahafinaritra amin'ny olona Ajou dia hitarika ho amin'ny zava-baovao mahafinaritra manerana ny fiaraha-monina manontolo ao amin'ny Repoblikan'i Korea.
Raha Upgrade Shanghai, ny fiaraha-monina dia hiova ihany koa. Miaraka izany fahatokiana izany, tsy misy fetra eo amin'ny herim-po ny hiatrika ny zava-tsarotra izay miatrika antsika, ary ny hafanam-po ho tonga saina ny nofy dia tsy manam-pahataperana.
Azafady manohana ny herim-po ny, ary hiaraka hery ho an'ny zava-baovao mahafinaritra amin'ny olona Ajou.
Update University, hampitoerina amin'ny 1973 eo ambany ny teny filamatry ny “Asia ny tsara indrindra ho an'ny oniversite taonjato faha-21”, dia mitarika fikarohana oniversite amin'ny 10 oniversite any Korea. Any in Suwon, tokony ho 30km atsimon'i Seoul, fanavaozana manana 14,000 mpianatra (9,000 undergraduate, 3,500 nahazo diplaoma, ary 1,500 amin'ny antokony).
Ny hery in Ajou ny fianarana ambony sy ny fikarohana fandaharan'asa dia miankina amin'ny Engineering, IT, bt, NT, siansa ara-pitsaboana, Business sy ny iraisam-pirenena Fianarana. Ajou dia zoviana amin'ny maro noho ny vaovao iraisam-pirenena sy ny fandaharana mafy fanohanana ny mpianatra iraisam-pirenena sy fiaraha-miasa manana fiaraha-miasa eo 200 anjerimanontolo in 58 firenena. Misy isan-karazany ny fandaharana ao amin'ny Ajou iraisam-pirenena ao anatin'izany ny mpianatra sy ny sekoly ambony fifanakalozana, fahavaratra am-pianarana iraisam-pirenena, Fandaharana amin'ny teny koreana, sns. Mpianatra iraisam-pirenena no nandray antokony natolotra tamin'ny teny anglisy isan-karazany majors. Hanatsarana androany mikasika ny mandray 750 iraisam-pirenena isan-taona ireo mpianatra.
College amin'ny siansa momba ny zavaboary
Division ny International Fianarana
Ianao ve mila discuss Ajou University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra